Caller Name ကြေငြာသူ - Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း - အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအက်ပလီကေးရှင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Caller Name ကြေငြာသူ - လက်ငင်းအခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုအက်ပ်
Caller Name Announcer - လက်ကိုင်ဖုန်းအခမဲ့အက်ပ် APK
Caller Name Announcer သည်ခေါ်ဆိုသူအားကြေငြာရန်အသံအင်္ဂါပါသောအဝင်ခေါ်ဆိုမှုများကိုချက်ချင်းဖော်ထုတ်ပြီးသင့်အားအကြောင်းကြားသည်။ သင်ကားမောင်းနေစဉ်သို့မဟုတ်သင့်ဖုန်းသည်အိတ်ကပ်ထဲ၌ရှိနေစဉ်ဖုန်းကိုမကြည့်နိုင်သည့်အခြေအနေများတွင်ခေါ်ဆိုသူ၏အကြောင်းကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ရန်အကောင်းဆုံးခေါ်ဆိုသူကြေငြာချက်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဖုန်းကိုပင်မအင်္ဂါရပ်များနှင့်ထိစရာမလိုဘဲချက်ချင်းခေါ်ဆိုသူသည်မည်သူဖြစ်ကြောင်းကိုရှာဖွေပါ။
အစွမ်းထက်သော Caller ID ကအမည်မသိနံပါတ်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးသောကြောင့်ခေါ်ဆိုသူ၏အမည်စပီကာ၏ထပ်ဆောင်းဆုကြေးနှင့်သင်မည်သူခေါ်သည်ကိုသင်အမြဲသိလိမ့်မည်။ သင်အဝင်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုလက်ခံရရှိသည့်အခါအချိန်မရွေးကြေညာလိမ့်မည်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုထည့်ပါ! သင်၏စာပါအကြောင်းအရာကိုအသံကျယ်ကျယ်ဖြင့်ဖတ်ရန်ပင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဖော်ထုတ်ထားသည့်ခေါ်ဆိုသူအားသိမ်းဆည်းပြီးသင်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါကခေါ်ဆိုသူ၏အမည်ကြေငြာသူ၏ဆက်တင်များကိုပြုပြင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းတွင်အောက်ပါအားသာချက်များရှိသည်။
•လက်ငင်းခေါ်ဆိုသူအမည်ကြေငြာချက် - ဖုန်းပြောသူနှင့်ဖုန်းကိုမကြည့်ပဲဖုန်းခေါ်ပါ
•သင်၏အကြိုက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ - Caller Name Announcer ကိုအချိန်မရွေးပိတ်ထားပါ
• Real-time Caller ID: စိတ်အညစ်ခေါ်ဆိုမှုများကိုအသိဥာဏ်ရှိရှိ ဦး စားပေးသည်
ဤသည်အလွန်ကြောက်မက်ဘွယ်ကြေညာခေါ်ဆိုသူ app ဖြစ်ပါတယ်!
Caller Name ကြေငြာသူ - လက်ငင်းအခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုအက်ပ်
9.12 ကို MB